भक्तपुरमा नपामै कोरोना भाइरसको परीक्षण – Indepth.com.np
विदेशबाट फर्केका भक्तपुर नगरवासीको आरडीटीबाट कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण गर्दै स्वास्थ्यकर्मी । तस्बिर : इन डेप्थ
भक्तपुर । भक्तपुरमा नगरपालिका तहमै कोरोना भाइरस संक्रमणको द्रूत परीक्षण विधि (आरडीटी) सुरु भएको छ । जसअनुसार मध्यपुर थिमि, सूर्यविनायक र भक्तपुर नपामा कोरोना भाइरसको आरडीटी सुरु गरिएको हो ।
यसअघि सरकारले कोरोना परीक्षणको लागि हब अस्पताल तोकेको भक्तपुर अस्पतालमा मात्रै आरडीटी र पीसीआर विधिबाट कोरोना भाइरसको परीक्षण हुँदै आएको थियो ।
भक्तपुरका नगरपालिकाहरुमा समेत परीक्षण सुरु भएपछि कोरोना भाइरस सक्रमण फैलिएको देशबाट स्वदेश फर्केकाहरुमा संक्रमण भए नभएको पुष्टि हुने विश्वास गरिएको छ । मध्यपुर थिमि नपाले आफ्नै अस्पताल नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा कोरोना भाइरस परीक्षण गरिरहेको छ । अस्पतालले विदेशबाट आएर नपामा बसोबास गर्ने ५३ जनाको कोरोना भाइरस परीक्षण गरेको नगर प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार परीक्षण गरिएका सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो ।
त्यस्तै सूर्यविनायक नपाले पनि आफ्नै नगरपालिका अस्पतालमा आरडीटीबाट कोरोना भाइरस परीक्षण गर्दै आएको छ । उक्त अस्पतालले आइतबार चारजनाको आरडीटी कोरोना भाइरस परीक्षण गरेको थियो । जसअनुसार चारैजनाको रिपोर्ट नगेटिभ आएको अस्पतालले जनाएको छ ।
चाँगुनारायण नपाका विदेशबाट आएका अधिकांशको कोरोना भाइरस परीक्षण भइसकेको छ । उक्त नपामा विदेशबाट आएका एकसय १० जनाको अभिलेख भएकोमा एकसय ८ जनाको कोरोना भाइरस परीक्षण भइसकेको नपाले जनाएको छ । जसमध्ये दुई जना अहिलेसम्म नपाको सम्पर्कमा नआएको नगर प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले जानकारी दिए ।
सोमबार भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो जनस्वास्थ्य केन्द्रमार्फत विदेशबाट आएका आफ्ना नगरवासीको कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण सुरु गरेको छ ।
भक्तपुर नपाद्वारा सञ्चालित जनस्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा. रत्नसुन्दर लासिवाले विदेशबाट आएर बसेका तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थामा नगराएकाहरुको द्रूत परीक्षण विधिबाट कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हालसम्म विदेशबाट फर्केका नगरभित्रका एकसय ४५ जनाको नामावली संकलन भएको छ । वडा कार्यालयमार्फत संकलन भएको उक्त नामावलीअनुसार वडा वडामै गएर उनीहरुको स्वायब परीक्षण गरिने डा. लासिवाले बताए ।
‘वडा कार्यालयमार्फत कोरोना भाइरस परीक्षण नभएका विदेशबाट आएका एकसय ४५ जनाको नामावली संकलन भएको छ’, उनले भने, ‘उक्त नामावलीअनुसार सम्बन्धित वडामा गएर उनीहरुको कोरोना भाइरस परीक्षण गर्नेछौं ।’
उनका अनुसार सोमबार वडा नं १० मा परीक्षण गरिएका नौजनाको आरडीटी रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।
डा. लासिवाले मंगलबार नपाको वडा नं ४, ५ र ९ मा परीक्षण गरिने जानकारी दिए ।
भक्तपुर नगरभित्र आरडीटी कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण गर्न जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरले कीट उपलब्ध गराएको हो ।
Related Topics:COVID 19FeaturedHealthSocial
मन्त्री र सांसदको पहलमा मजदुरहरु गन्तव्यतिर